MPANENDAKA TENY ANTOHOMADINIKA : Niakatra fampanoavana omaly ny raharaha
Tovolahy 01, 18 taona, monina eo Antohomadinika, no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny CSP4 Isotry nandritra ny fisafoana nataon’izy ireo teny amin’ny faritra Antohomadinika ny alarobia 22 aogositra 2019 teo. 23 août 2019
Nandalo teo Antohomadinika ireo polisy mpanao fisafoana tamin’io alarobia io tokony ho tamin’ny 09 ora sasany alina . Tamin’izay indrindra no nahatsikaritra tovolahy 01 nanaraka olona avy ao aoriana ka dia nanapa-kevitra ny hanao fizahana ny mombamomba azy. Raha nahita ny Polisy nanatona azy anefa izy dia nandositra avy hatrany. Raikitra ny fifanenjehana ka voasambotra tsy lavitra teo.
Nandritra ny fisavana dia tsy nahitana kara-panondro teny aminy. Nandritra ny fanadihadiana azy no nahafantarana fa efa nifonja izy ny taona 2017 noho ny antony harom-paosy hatrany. Niaiky ihany koa izy fa efa hatramin’ny taona 2016 no nifoka rongony alohan’ny hanaovany ny asa ratsiny. Natolotra ny Fampanoavana ny alakamisy 22 aogositra 2019 izy.
Nihoa-pefy ny mpitari-posy, nirefotra ny lakrimôzena polisy iray naratra voatora-bato FANDAVANA FIHIBOHANA (177) 27 mars 2020 Lehilahy 23 taona hita faty tao an-tranony ny sabotsy antoandro lasa teo ARANTA (120) 31 mars 2020 Nankatoavin’ny Fanjakana malagasy sy ny Oms FIKAROHANA HIADIANA AMIN’NY CORONAVIRUS NATAON’NY IMRA (114) 27 mars 2020 Tranga 6 nanokafana fanadihadihana, olona iray naiditra am-ponja FANAPARITAHANA VAOVAO TSY MARINA (110) 27 mars 2020 Fiara iray nifaoka mpandeha an-tongotra, miisa 02 ireo maty tsy tra-drano TSARASAOTRA (87) 27 mars 2020 Lavon’ny balan’ny Polisy ny jiolahy iray, karohina ny namany FIKASANA FANAFIHANA “VILLA” (77) 31 mars 2020